umbala Steel amasethi
Singabantu insimbi engagqwali ubucwebe nomkhiqizi futhi elithengisa, ngakho moq yethu USD 300, 3 PC design ngayinye usayizi ngayinye.
Kodwa uma ngempela kudingeka isampula ukuhlola, ungakwazi oda USD 100 okungenani, izindleko lokuthumela imayelana USD 30 1 kg.
Wish singakha ibhizinisi kangcono futhi ubungane.
Sikufisela okuhle kodwa
Thina ngaso sonke isikhathi nginothile esandleni ukuphendula imibuzo yakho. Sikholelwa nesikhathi kwamakhasimende, futhi uyokwenza konke okusemandleni ukwanelisa amakhasimende ethu. Uma uneminye izinkinga, imibono, noma iziphakamiso, sicela uxhumane nathi.
Ubulungu Izinga: (accoring oda lemali yakho, uyojabulela ezahlukene ezingeni disccount)
Kepha thina asamukelanga oda ezingasho nsuku zonke, thina kushintshwe inqubo yethu yokusebenza ukuze ukunikeza isevisi kangcono amakhasimende ethu futhi uqiniseke amakhasimende ethu bangathola oda ngesikhathi.
Ukulandela izinyathelo zethu ezintsha zokusebenza:
(Ngokusho Bejing Isikhathi)
1. Njalo ekuseni, zonke oda amasha okuyinto zikhokhelwa kakade ngaphambi 12:00 emini, sizobe zihlele futhi uhlole isitokwe ngesikhathi ngosuku olufanayo.
Uma ukwenza inkokhelo emva 12:00 emini, sizobe zihlele futhi uhlole isitokwe ngosuku olulandelayo.
2. Ngemva oyitholile uhlu ukupakisha, uma ungenza inkokhelo yokugcina ngaphambi 6:00 pm, singakwazi ngomkhumbi out oda ngesikhathi busuku.
Uma ukwenza inkokhelo ngemva 6:00 pm, sizokwenza ngomkhumbi out oda ngosuku olulandelayo.
3.For oda zazo ikhokhwe kakade, uma ngabe uzenze ngokungeza oda ngokuqedela ibhalansi phambi 12:00 emini, sizokuthumela lokugcina uhlu nokupakisha ngesikhathi langa ngomkhumbi out oda ngosuku olulandelayo.
Uma wenze oda ngokungeza ngokuqedela ibhalansi emva 12:00 emini, sizobe zihlele oda nokungeza ukuthumela lokugcina uhlu nokupakisha ngosuku olulandelayo kuwe futhi i-oda kuyoba ngomkhumbi ngemuva kusasa.
Ngaphambi kokwenza oda, sicela hlela ngomusa isikhathi kuye ngesimo sakho siqu.
Siyaxolisa lula oholele kuwe.
PayPal akhawunti: julong@julongsteeljewelry.com
Sicela uxhumane nathi ngaphambi kokuba wenze ukukhokhelwa by inyunyana entshonalanga, ukuhlola negama owamukelayo sika.
Ukudluliselwa ebhange Imininingwane
Yomhlomuli Bank igama: HSBC
Bank Ikhodi: 004
-Akhawunti kungekho Bank. : 801406885838
yomhlomuli Bank: 1 Queen Road Central, Hong Kong
I-SWIFT Ikhodi: HSBCHKHHHKH
We ngomkhumbi kunoma ikheli emhlabeni.
Izinto ngaphambilini ngathi ezithunyelwa nge-EMS noma TNT noma DHL noma FedEx noma UPS.
We uzokwazisa nge ethungatha Cha nge e-mail ngokushesha njengoba i-oda lakho yathunyelwa lapho sithola ke kusukela inkampani express.
Ikheli lomgwaqo liyadingeka ukuthunyelwa.
Thengela ukudayisa uthole inzuzo izothunyelwa ejwayelekile umnyango Air kukhiphe umnyango, okuyinto ethatha cishe 3-5 izinsuku zokusebenza.
Isikhathi Delivery ungafaki processing time.
Imikhiqizo yethu yathunyelwa nsuku zonke, kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, ngaphandle namaholide. Ama-oda Iningi ibekwe ngezinsuku zeviki uzobe athunyelwa izinsuku 2 noma 3, kuyilapho ama-oda afakwe ngezimpelasonto uzobe ezithunyelwa NgoMsombuluko elandelayo. Uzothola i isiqinisekiso e-mail nenombolo yakho yokulandelela. amahora amabili nane emva kokuba uthole inombolo yakho yokulandelela, uyokwazi ukulandelela oda lakho ku-intanethi ku
ziyahlukahluka neSikhathi sokudiliva kuye ezweni uya khona.
jinyun imigexo uyakhile ngokubambisana okuqinile nazo zonke ezinkulu izinkampani ezine lokuthumela: DHL, UPS, FedEx futhi TNT ukuhlinzeka professional umnyango ngemuti ukulethwa emhlabeni wonke.
Izinto zizosuswa yathunyelwa ezinsukwini ezilandelayo ibhizinisi ngemuva kokuthi ngahlola. Ngokuvamile, kungase kuthathe izinsuku zebhizinisi ezingu-3-5 ukuthunyelwa, kuncike ukulethwa ezahlukene kusho ukuthi ukhetha. Asingene for ikheli elingalungile noma ayithumeleki. Sicela uqinisekise ikheli lakho lokuthumela ilungile futhi okungase kwenziwe.
Sivumela ukulandelela oda lakho ngesikhathi Ngokucifiza i-mouse. Lapho ukuhambisa kwakho kuqinisekisiwe, uzothola inombolo zokulandela isiqinisekiso lakho le-imeyili.
Kuyoze kube nini ukuthatha into yami ukuze ufinyelele kimi?
Sicela uqaphele ukuthi izinsuku zebhizinisi, kungafaki uMgqibelo, iSonto kanye Public Holidays, kubalwa ngokuya ukulethwa isikhathi. Ngokuvamile, kuthatha cishe izinsuku zebhizinisi ezingu 3-5 for kwezidingo.
Ngingayithola kanjani umkhondo mpahla yami?
We ngomkhumbi ukuthenga kwakho ngaphambi kokuphela kosuku yebhizinisi olulandelayo emva uke ungene phandle. Sithanda uthumele ie-mail ne inombolo yokulandelela ukuze ukwazi ukuhlola ukuqhubeka ukulethwa yakho ngesikhathi 'iwebhusayithi yenethiwekhi.
Yini okufanele ngiyenze uma mpahla lami aziphindanga ifika?
Sicela uvumele kufika izinsuku ezingu-10 zebhizinisi yento yakho ukuze sikhululwe. Uma ingafiki, sicela wazise nathi ngokuchofoza inkinobho ethi "Contact Us" kuwebhusayithi. Sizokwenza uthole emuva kuwe ngokushesha.